बहुमतको बल देखाउने मनस्थितिमा प्रचण्ड, ओलीलाई हटाउने यस्तो छ तयारी ! - Sidha News
बहुमतको बल देखाउने मनस्थितिमा प्रचण्ड, ओलीलाई हटाउने यस्तो छ तयारी !
काठमाडौं। सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्रको वि’वाद फेरि च’र्किएको देखिएको छ । प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उनलाई हटाउने प्रयासमा रहेको अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहितको खेमाबीच सार्वजनिक रूपमा आरोप-प्रत्यारोप सुरु भएको छ । स्वयम् प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री लक्षित हमला सुरु गरेर विवाद जीवित रहेको सन्देश दिएका छन्। प्रधानमन्त्री ओली निकट नेताहरू सार्वजानिक रूपमा त्यसको प्रतिवादमा उत्रिएका छन्।
प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उनलाई हटाउने प्रयासमा रहेको अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहितको खेमाबीच सार्वजनिक रूपमा आरोप-प्रत्यारोप सुरु भएको छ । स्वयम् प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री लक्षित ह’मला सुरु गरेर वि’वाद जीवित रहेको सन्देश दिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओली निकट नेताहरू सार्वजानिक रूपमा त्यसको प्रतिवादमा उत्रिएका छन्।
ओली पक्षको प्रतिवाद
लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा आफूहरूले समयमै प्रकाशित गर्न लगाएको प्रचण्डले शुक्रवार बताएका थिए । प्रदेश नं ५ का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोख्रेल र प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले त्यसको प्रतिवाद गरेका छन् । निर्वाचन आयोगमा नेकपा एमाले पार्टी प्रधानमन्त्री ओली समेतको सक्रियता र पहलमा दर्ता भएको आरोप प्रचण्डको छ । पोख्रेल र थापाले त्यसको भने खण्डन गरेका छैनन् । प्रचण्डले पार्टी समान्य अवस्थामा नभई सङ्कटमा रहेको सार्वजनिक रूपमा बोलेका छन्।
बहुमतको बल देखाउने मनस्थितिमा
प्रधानमन्त्रीले कुनै वैकल्पिक बाटो नदिएमा साउन १३ गते बस्ने स्थायी समितिबाट प्रक्रियामा अघि बढ्ने र ‘बहुमतको बल देखाउने’ मनस्थितिमा प्रचण्ड पक्ष पुगेको नेताहरूले जनाएका छन् । स्थायी समिति वा केन्द्रीय समिति जहाँबाट भए पनि प्रक्रियागत रूपमा अघि बढेमा बहुमतको आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आउने देखिन्छ । स्थायी समिति सदस्य मणि थापाका भनाइमा दुईजना अध्यक्षबीचको सहमतिमा जे निर्णय पनि हुनसक्छ तर दुईमध्ये एकजनाको असहमतिमा निर्णय प्रक्रिया अघि बढेमा त्यो पार्टी एकताको सिद्धान्त विपरीत हुन्छ । पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका नेता थापाले भने, “त्यसो भयो भने एकताको सिद्धान्तमा हाम्रो छलफल हुन्छ, शक्तिसन्तुलन के हुन्छ अहिले भन्न सकिने स्थिति छैन । प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा पूर्वएमाले पृष्ठभूमिका अन्य वरिष्ठ नेताहरूले देखाएको अडान प्रचण्डका निम्ति प्रधानमन्त्रीवि’रुद्ध बहुमतको बल प्रयोग गर्ने आधार बनेको देखिएको छ । पार्टीको विवादमा पूर्वएमालेका नेताहरू जस्तै पूर्वमाओवादीका नेताहरू पनि विभाजित देखिएका छन् जसले प्रधानमन्त्रीलाई बल दिने ठानिएको छ।
टेलिभिजनमा समाचार पढ्दा पढ्दै यी पत्रकारको
पछिल्लो २४ घण्टामा थप २२२५ जनामा
सबैभन्दा बढी उपत्यकामा मात्र १११० जना
नेपालमै जन्माइन् बिहेकै दिन बेहुलीले बच्चा
प्याजको मुल्य सुनेरै आँसु बग्ने भयो
भृकुटीमण्डपको खुला बजार छैन चहलपहल
पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई दम्पतीलाई कोरोना
धेरै बिराला भए भने मुसा मार्दैनन् भनेजस्तै भयो हाम्रो पार्टी-नेता रिजाल
दुई मन्त्री बर्खास्त गर्न प्रचण्डको निर्देशन
खरा, हक्की तर परिपक्‍व
प्रधानमन्त्री र रअ प्रमुखबीचको भेटले अर्को राष्ट्रघातको तयारी हुँदैछ भन्ने आभाष हुन्छःवैद्य
भारतमा चुनावी वाचा – भोट देऊ, सित्तैमा भ्याक्सिन लेऊ
भ्रम नफैलाऔँ, सबै नागरिकको कोरोना परीक्षण र उपचार यथोचित रुपमा सरकारले गर्छ- प्रधानमन्त्री ओली
चुच्चे नक्सा नै छ ; हेर्न नजान्‍ने ट्विटेहरु उफ्रिरहेका छन्